Marc Ravalomanana Manetsika ny mpiara-dia aminy
Raopilanina 5, angidimby 4, fiara 134… Novidiana tamin’ny vola avy aiza ?
Zary efa maty izany tafika ana habakabaka Malagasy izany satria tena tsy misy fitaovana intsony.
Andry Rajoelina Voafatotry ny aferan’ny tetezamita
Miezaka ny filoha fa mbola mifoha hatrany ny ampamoaka mahakasika ny fitantanany tamin’ny andron’ny tetezamita.
Praiminisitra Ntsay Christian Manamafy ireo fiaraha-miombon’antoka
Nampiantso atrikasa handraisana fanapahan-kevitra momba ireo laharam-pahamehana amin’ny andiany faharoa amin’ny fampiasana ny famatsiam-bola avy amin’ny Firenena Mikambana ho fanamafisana ny filaminana sy ny fandriampahalemanana eto Madagasikara ny Komity mpitantana izany, notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy Rtoa Violette Kakyomya,
Kaominina Ivato Betsaka ny asa vitan’ny Ben’ny tanàna ary mbola hotohizana
Nivoaka tamin’ny fahanginany i Penjy Randrianarisoa Ben’ny tanànan’Ivato omaly manoloana ireo zava-bitany tao anatin’ny efa-taona nitondrany ny kaominina Ivato.
Antenimieram-pirenena Mbola baraingo ny ho mpanohitra
Araka ny vokatra vonjimaika avy amin`ny CENI, ny vondrona politika manohana ny filoham-pirenena no nahazo ny maro an`isa.
Fankalazana ny fetim-pirenena Naverina ny kermesin’ny Tafika
Tany amin` ny Repoblika voalohany no nisy farany ny kermesin`ny Tafika Malagasy teny Betongolo karakarain'ny Foloalindahy teto amintsika noho ny antony fandriampahalemana.
Marc Ramiaranjatovo Mbola hilatsaka hofidiana ho Ben’ny tanàna
Ny fanomanana ny fifidianana Ben’ny tanàna indray izao no malaza eto amintsika. Ho an’ny kaominina Alasora, distrikan’Antananarivo Avaradrano manokana dia fantatra fa mbola hilatsaka hofidiana Atoa Marc Ramiaranjatovo hahafahany manohy ireo asa tsy vita ao anatin’ity kaominina iadidiany ity.
“In-dray mandeha no manta vary ka tsy handevin-tsotrobe”, hoy ilay fomba fiteny Malagasy.
Maneho izany i Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia ao anatin’ny TIM sy K25 amin’izao taorian’ny fifidianana filoham-pirenena feno lesoka sy tsy fahamarinana, saingy nisy ny fandeferana lehibe natao. Mihetsiketsika ny TIM ankehitriny ka na vita aza iny ny fifidianana filoha dia mitohy foana ny fiainan’ny antoko sy ny fiainam-pirenena. Tsy mamela ireo mpiara-dia ho irery i Marc Ravalomanana ary tsy arakaraka ny teny feno fanesoana nataon’ny an-daniny amin’ny efa handeha hisotro ronono fa maneho hatrany fa an’ny vahoaka Malagasy sy tena akaiky azy izy. Tao anatin’ny andro vitsy dia nitafa sy nihaona tamin’ny vahoakan’Antsirabe i Marc Ravalomanana. Nanao adidy amin’ny firenena tamin’ny alalan’ny fambolen-kazo niarahana tamin’ny rehetra, izay notontosaina tao Mahafaly Vatofotsy izy mivady omaly. Samy naneho ny fihetseham-pony daholo ny olona rehetra nihaona tamin’i “dada”. Tao ny faly ary tao ihany koa no latsa-dranomaso,... Tsy maty ao ampon'ny olona ny fitiavana azy. Sady fifampiarahabana noho ny fahatrarana ny taona 2019 niarahan’i Marc Ravalomanana mivady sy ny vahoakan’Antsirabe ny fotoana omaly, ka nandritra izany no nanolorany omby matavy miisa 4 ho nofon-kena mitam-pihavanana ho an’ny vahoaka. Notoloran’ny K25 sy ny TIM Antsirabe ondry matavy kosa izy mivady ho mari-panajana sy fankasitrahana. Anio dia hisy ny fihaonana hatao eny amin’ny Magro Tanjombato, ka andrasana izay ho toromarika avy amin’i Marc Ravalomanana sy ny zavatra mety hataon’ny Antoko Tiako I Madagasikara. Ny azo antoka dia miomana fatratra amin’ny amin’ny dingana manaraka ny TIM, ka efa nanentana mpiara-dia rehetra amin’ny fiatrehana ny fifidianana isan’ambaratongany tsy ho ela dia ny fifidianana Solombavambahoaka, Ben’ny tanàna,… I Marc Ravalomanana. Entano dieny izao ny mpiaramonina hisoratra anarana amin’ny lisi-pifidianana izay efa nisokatra nanomboka tamin’ny voalohan’ny volana desambra 2018, hoy izy. Marihina fa ny faran’ny volana febroary izao no hifarana ny fahafahana manamarina sy manoratra anarana eny amin’ny fokontany”. Miaina ary tsy ho voagejan’ny mety ho tsy ho fahombiazana sy ny kajikajy maloton’ny fifidianana filoha teo ny TIM, ka tsy hilavo lefona fa vonona hiatrika ny ho avy sy hampiseho ny heriny.